မုလအိခေါ်သံ (သို့) ဒေါနတောင်တန်းပေါ်မှ Camping ⛺ – YANGON STYLE
မုလအိခေါ်သံ (သို့) ဒေါနတောင်တန်းပေါ်မှ Camping ⛺
Camo site နားတစ်လျှောက်
အမြဲတမ်းချင်းတောင်တန်းတွေကြီးပဲသွားနေလို့ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကရင်တောင်တန်းတွေဖက်ကို ခြေဦးပြန်လှည့်ခဲ့ပါတယ်။ မုလအိတောင်လို့ပြောလိုက်ရင် လူတိုင်းနီးပါးသိကြမှာပါ။ ရောက်ဖို့လဲခက်ခဲသလို တော်ရုံLuxury သမားတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
မုလအိဆိုတာ ဒေါနတောင်တန်းတွေပေါ်မှာ ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ထွဋ်၊ ကရင်ပြည်နယ်မှာဆို တတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ထွဋ်တစ်ခုပေါ့…..
အမြင့်ပေ ၆၅၇၈ ပေရှိပြီး ကရင်ပြည်နယ်တောနက်ကြီးထဲက တန်ခိုးကြီးတဲ့ မုလအိဘုရားတည်ရှိရာနေရာလဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုနေရာမှာ Camping လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသွားပီမလား🤔🤔🤔 Camping ဆိုဗမာတွေထက် ထိုင်းတွေအလာများပါတယ်။ ကဲ Camping ကဘလိုတွေလဲဆိုတာ TD နဲ့အတူ ခဏလောက်သွားကြည့်လိုက်ရအောင် 🤩🤩🤩
ဟိုင်း ငါပါ ယောက်ကျားလေးမဟုတ်ပါဘူး မိသဒ္ဓါပါ — at Mulayit, Mynmar.
မုလအိကိုသွားမယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး မြဝတီမြို့ကိုအရင်သွားရပါမယ်။ အဲ့တော့ ရန်ကုန်ကဆိုရင် မြဝတီကို Expressရိုးရိုး၊ VIP ၂မျိုးရှိပါတယ်။
မန္တလာမင်း၊ GI စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိတာမို့ အဆင်ပြေတဲ့ ယာဉ်လိုင်းကိုရွေးချယ်စီးလို့ရပါတယ်။ ရိုးရိုးဆို တစ်သောင်းပတ်ချာလည်ပဲပေးရပါတယ်။
သဒ္ဓါတို့ကအခု @Hpaann.con နဲ့ချိတ်ပြီးသွားတာဆိုတော့ မြဝတီကနေစပြီး ခရီးစဉ်စပါတယ်။ မြဝတီရောက်ပြီဆိုရင် မနက်စောစောဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ကိုယ်လက်သန့်စင် မနက်စာစားသောက်ပြီး ၉နာရီလောက်မှာ တောင်တက်မယ့်ကားလာကြိုပါတယ်။ အဲ့မတိုင်ခင်တော့ မြဝတီစျေးထဲဝင် လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ရင်းစောင့်ကြတာပေါ့။ တောင်တက်မယ့် ကားဆိုတာလဲ လုံးဝ Off road နော်4wheelကားကြီးနဲ့ 🤨 အပင်ပန်းမခံနိုင်တဲ့လူကတော့ လုံးဝမလိုက်သင့်ပါဘူး။ Adventure ကြိုက်တဲ့သူ၊ အပင်ပန်းခံနိုင်တဲ့သူတွေပဲ လိုက်သင့်တဲ့ခရီးပါလို့ အကြံပေးပရစေ😊
အပူဒဏ်ကာကွယ် ဖုန်ဒဏ်ကာကွယ် 😂 — at Mulayit, Mynmar.
နေ့လည်စာစားတဲ့ဆိုင် — at Mulayit, Mynmar.
လမ်းကနေ့လည်စာ ကရင်ချက်တွေနဲ့မြိန်ပ — at Mulayit, Mynmar.
ခင်သန်းနုတို့ အဖွဲ့နဲ့ — at Mulayit, Mynmar.
မြဝတီကနေ ၁ နာရီကျော်လောက်က ဖုန်မထတဲ့ ကွန်ကရစ်လမ်းလေးတွေပေါ့။ပျော်လို့ကောင်းတုန်းရှိသေး ခဏနေရင်တော့ ဖုန်အလိမ်းလိမ်းထတဲ့ လမ်းကိုရောက်ပါပြီရှင် 😂 ဖုန်ရှုလိုက်ဆိုတာ အဲ့မှာစတာပဲ🤣 Mask တွေကို Hpaann.com ကပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်လဲ ပဝါတို့၊ သဘက်၊ ဦးထုပ်စတာတွေယူသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ မပါလာတဲ့သူ ဖုန်ရှုပေတော့ပဲ။ တောင်ပေါ်ရောက်ဖို့ ၃ နာရီလောက်စီးရဦးမှာလေ…….တောင်အလယ်လောက်မှာတော့ နေ့လည်စာစားမယ့်ဆိုင်ကိုရောက်ပါတယ်။ ခြေလက်သန့်စင်ပြီး ကရင်ချက်လေးတွေနဲ့ နေ့လည်စာစားပြီး ဖုန်ဆက်ရှုဖို့ အားမွေးကြတာပေါ့လေ 😜😜
ရေချိုးတဲ့နေရာ ကင်ပွန်းစခန်း — at Mulayit, Mynmar.
ဒီလို စမ်းချောင်းတွေလဲဖြတ်ရတယ် — at Mulayit, Mynmar.
မနိုင်ဘူးနော် 😜😜 — at Mulayit, Mynmar.
ဘုရားရောက်ခါနီး တောင်ခြေမှာ ကင်ပွန်းစခန်းဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲ့ကိုရောက်ရင် လာသမျှကားတိုင်း အကုန်ရပ်ပြီး ခရီးသွားဘုရားဖူးအားလုံး ရိုးရာအရ ရေမိုးချိုးကိုယ်လက်သန့်စင်ရပါတယ်။ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီးမှသာ ဘုရားရှိတာတောင်ကိုတက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ရေချိုးလို့ရမယ့်နေရာတွေလုပ်ပေးထားပါတယ်။ မိန်းကလေးသီးသန့်၊ ယောက်ကျားလေးသီးသန့်မို့ အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ ရေချိုးလို့ကတော့ရှယ်ကောင်းပဲ 😁✌🏻 မိန်းကလေးတွေ အတွက်လည်း ရေလဲထဘီတွေ ထားထားပေးတာမို့ အဆင်ပြေတာပေါ့။ ရေချိုးပြီးရင် သနပ်ခါးလိမ်းဖို့ ကျောက်ပြင်နဲ့ မှန်လဲထားပေးထားသေးတယ်။ ယောက်ကျားလေးရော မိန်းကလေးရော အကုန်ပါးကွက်လေးတွေနဲ့ ချစ်စရာလေးတွေ (ကိုယ့်တွေအဖွဲ့ပြောပါတယ်😜)
ပြီးရင်တော့ ဖုန်နဲနဲထပ်ရှုဖို့ ကားပေါ်ပြန်တက်ကြတပေါ့🤧
ကင်ပွန်းစခန်းရှေ့မှာတော့ သိပ်ပြီးဖုန်မထတော့ပါဘူး မိနစ်၃၀ ကျော်လောက်စီးပြီးရင် ဘုရားတောင်ခြေဘုန်းကြီးကျောင်းကိုရောက်ပါပြီ။
သက်သက်လွတ်နယ်မြေဆိုတော့ သက်သက်လတ်ထမင်းဟင်း စတုဒီသာတွေကြွေးပါတယ် 🤩🤩
ပြန်ဆင်းလာမှ စားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ Camp site သွားဖို့ရှေ့ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ TD တို့နေမယ့် Camp site ကိုရောက်ဖို့ တောင်ကုန်းတောင်တက်လေးတွေနဲ့ ၄၅ မိနစ် လောက်တော့ လမ်းလျှောက်ရပါတယ်။
ကိုယ့်ကျောပိုးအိတ်လေးကိုယ်လွယ်ပြီး ပျော်ပျော်ကြီးပေါ့။ ခဏလောက်တောင်ကုန်းလေးတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးတာနဲ့ Tent ရောင်စုံလေးတွေကို စမြင်ရပါပြီ 🤩 ထိုင်းတွေကကိုယ်တွေထက် အရင်ရောက်ပြီး နေရာတောင်ဦးထားကြပြီလေ။
Camp site ကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်နေရာ — at Mulayit, Mynmar.
ကျောက်ငါးမန်းဆိုလား — at Mulayit, Mynmar.
ဒီလိုလေးတွေလဲရှိတယ် — at Mulayit, Mynmar.
ဟိုးရှေ့က မုလအိတောင်ထိပ် — at Mulayit, Mynmar.
Camp site ကိုသွားရင် အဲ့သလို — at Mulayit, Mynmar.
ဒေါနတောင်တန်းပေါ်က Camp site 🏕️
ကိုယ်တွေနေမယ့် Camp site ရောက်တာနဲ့ အိုး ခိုင် မော့ အမေးဇင်းပါပဲ ဘေးပတ်ချာလည် မြင်ကွင်းတွေက😮😮 လမ်းကြမ်းကြီးကို ၄ နာရီလောက်စီးလာခဲ့ရတာတောင် မေ့သွားတယ်။ မုလအိအလှမှာ ခဏလောက် မှင်သက်သွားခဲ့တယ်။ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာထက် အပြင်မှာပိုလှတယ်ပြောရင် ယုံလိုက်ပါ။ မယုံရင်ကိုယ့်တိုင်သွားကြည့်ပါ 😬🤭
ချင်းတောင်တန်းတွေနဲ့မတူ တစ်မူထူးခြားတဲ့ ကရင့်တောင်တန်းတွေက သဒ္ဓါ့နှလုံးသားကို ခဏတာသိမ်းပိုက်သွားခဲ့ပြီလေ ကဲ ခုတောင်စာဖွဲ့မိသွားပြီ အပြင်မှာလဲ အဲ့လိုပဲ ထိုင်ကြည့်ပြီးကို စာဖွဲ့ချင်စရာကောင်းအောင် လှရက်လွန်းပါတယ်။ ကရင်ပြည်ကြီးမှာရှိပါလားလို့တောင် မထင်ရအောင် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ သဘာဝအလှပကြီးက အံ့ဩလောက်စရာ 💚💫 ခဏလောက် မှင်သက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ Tent ထိုးဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ Tentကိုယ်တိုင်ထိုးရမှာနော် 😉 ဒါလဲအတွေ့အကြုံသစ်တစ်မျိုးပါပဲ။ မထိုးတတ်ရင် Hpaann.com ကသဘောကောင်းတဲ့ အကိုကြီးတွေကူပြီး ထိုးပေးပါလိမ့်မယ် ✌🏻
ထိုင်းတွေရဲ့ Tent လေးတွေ — at Mulayit, Mynmar.
ကိုယ်တွေနေမယ့် Camp site ရောက်ပါပီ — at Mulayit, Mynmar.
မုလအိတောင်ပေါ်က တစ်ညတာ ⛺️
ကိုယ်စီ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြရင်း တောင်ပေါ်မှာ နေဝင်တာကိုကြည့်ရတဲ့ အရသာကဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးနော်။ သဒ္ဓါ့လို အဆွေးဓာတ်ခံရှိတဲ့လူအတွက်ကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးပေါ်ထိုင် သီချင်းအေးအေးလေးတစ်ပုဒ်ဖွင့်ပြီး ထိုင်ဆွေးတော့တာပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဘာဝအလှကို ခံစားပုံခြင်းတော့ တူမှာမဟုတ်ဖူးပေါ့။ တစ်ချို့ကလဲ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြ၊ တစ်ချို့ကလဲ စကားတွေထိုင်ပြောကြ၊ ကိုယ်ကတော့ အဆွေးတစ်လိုင်းမို့ ထိုင်ဆွေးနေရင်း ညနေဆည်းဆာအချိန်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။
ကရင်မလေးပါပေါ့ — at Mulayit, Mynmar.
ကိုယ်အိပ်မယ့် Tent လေး — at Mulayit, Mynmar.
သဘာအလှကို ဒီလိုလေးခံစားလိုက်တယ် — at Mulayit, Mynmar.
HpaAnn.com ကပေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ ရေဗူး — at Mulayit, Mynmar.
ဒီလိုလေးတွေ ရိုက်ခဲ့နော် — at Mulayit, Mynmar.
ဒေါနတောင်တန်းတွေရဲ့ အထက်မှာ — at Mulayit, Mynmar.
ပြောင်းဖူး၊ ကန်စွန်းဥ ကြိုက်တာဖုတ်စားပဲ — at Mulayit, Mynmar.
အဆွေးတစ်လိုင်းနော် — at Mulayit, Mynmar.
Aung Ko Ko Oo — at Mulayit, Mynmar.
ဟိုးနောက်မှာ မုလအိတောင်ဘုရားရှိတဲ့နေရာ — at Mulayit, Mynmar.
ညဖက် မီးပုံဘေး အဲ့သလိုဝိုင်းဖွဲ့ စကားပြော — at Mulayit, Mynmar.
ညရောက်လာပြီဆိုတော့ အတော်လေးလဲ အေးစိမ့်လာပါတယ်။ အကုန်လုံးကတော့ ညစာစားဖို့ စောင့်နေကြပြီလေ 🤭အသားကြိုက်တဲ့ကိုယ့်အတွက် သက်သက်လွတ်ပဲစားရတဲ့ နေရာဆိုတော့ ဘယ်လိုဟင်းတွေ ချက်ကျွေးမလဲ စိတ်ဝင်စားနေတာကတော့ ဟော့ဒီက မိသဒ္ဓါပါ။ ချကျွေးတဲ့ ဟင်းတွေကတော့ ရှယ်ပါ။ သက်သက်လွတ်လို့တောင် ထင်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခုချက် အခုကျွေးတဲ့ ထမင်းပူပူ၊ ဟင်းပူပူရယ်၊ ချမ်းစိမ့်နေတဲ့ရာသီဥတုရယ်၊ Flash မီးရောင်အောက်က သူငယ်ချင်းအသစ်တွေရယ်နဲ့ တောင်ထိပ်မှာ ညစာစားရတဲ့အရသာကတော့ ခုထိမေ့လို့မရပါဘူး။ စားကောင်းလားမမေးနဲ့ ကိုယ်တောင် နှစ်ပန်းကန် 🤭😜
ညစာစားပြီးရင်တော့ ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်ရယ် သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ စကားဝိုင်းလေးလက်ဆုံကြ ကြတာပေါ့။ UNO တွေဆော့ကြ၊ ဂိမ်းတွေဆော့ကြရင်းနဲ့ သူစိမ်းတွေကနေ မောင်နှမတွေအဖြစ်ကူးပြောင်းကြတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးပေါ့။ စိတ်တူကိုယ်တူတွေပဲဆိုတော့ စကားဝိုင်းလေးတစ်ခုမှာတင် အချစ်တွေပြည့်သွားခဲ့တာပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကြနောက်ကြရင်း ကြယ်တွေကြည့်ရင်း အနှစ်သာရအပြည့်အဝနဲ့ တစ်ညတာလေး……. တစ်ချို့ကတော့ ပင်ပန်းလို့ စောစောအနားယူကြတာပေါ့။ ကိုယ်တွေကတော့ ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ဇီးကွက်မို့ ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ရင်း ကြယ်တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက် တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပြောရင်းနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ ရက်ထပ်ရက်လေးကို ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အသည်းယားစရာ — at Mulayit, Mynmar.
ဒီလိုအစွန်အဖျားတွေ အများကြီးပဲ — at Mulayit, Mynmar.
နေဝင်ချိန်လဲ ဆွေး — at Mulayit, Mynmar.
camp site — at Mulayit, Mynmar.
crd @Hpaan.com — at Mulayit, Mynmar.
ကဲ ဘလောက်မိုက်လဲ တောင်တန်းတွေပေါ်က ခပ်မိုက်မိုက်အကိုကြီးပေါ့😂 — at Mulayit, Mynmar.
တောင်ပေါ်တက်လာတဲ့ ကတုံကရင်မလေး 😂 — at Mulayit, Mynmar.
မုလအိ မနက်ခင်း 🌄
နေထွက်ကြည့်ဖို့ Tent တံခါးဝကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ တောင်ပင်လယ်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်က Camping ရဲ့တစ်ကယ့်အနှစ်ပါပဲ။ သဘာဝကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သူတိုင်းအမှန်တကယ်ကို ကြိုက်မှာသေချာပါတယ်။ မနက်စာစားဖို့ကို အတွေးထဲမရှိပါဘူး။ တောင်ကြောတစ်လျှောက် ဓာတ်ပုံပတ်ရိုက်တော့တာပဲ။ ဆောင်းအငွေ့သက်လက်ကျန်လေးနဲ့ တောင်တွေအထပ်ထပ်ကာဆီးထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မနက်ခင်းကတော့ ခွန်အားတွေအပြည့်……
မနက် ကိုးနာရီလောက်မှာတော့ ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းပြီး မုလအိစေတီကို ဦးတိုက်ဖို့ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားပေါ်တက်မယ်ဆိုရင် ကားပေါ်မှာ အထုပ်တွေထားပြီး မိန်းကလေးတွေက ထဘီဝတ်ရပါတယ်။ မုလအိတောင်မှာ မိန်းကလေးတက်လို့ရတဲ့ ဘုရားနဲ့ ယောက်ကျားလေးတက်လို့ရတဲ့နေရာခွဲထားပါတယ်။ တောင်ထိပ်ဘုရားအထိ မိန်းကလေးတွေ တက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ဘုရားဖူးပြီး အောက်ပြန်ဆင်းလာကြပါတယ်။
ာ — at Mulayit, Mynmar.
ရာက စေတီတော် — at Mulayit, Mynmar.
လမ်းတစ်ဝက်မှာ ဂျပန်တွေတည်ခဲ့တဲ့စေတီ — at Mulayit, Mynmar.
ာကနေ ရိုက်ထားတာ — at Mulayit, Mynmar.
တောင်ထိပ်ကဘုရား — at Mulayit, Mynmar.
crd Hpaan.com — at Mulayit, Mynmar.
ဒီလိုတွေ သွားရပါတယ် — at Mulayit, Mynmar.
ါ့ — at Mulayit, Mynmar.
သက်သက်လွတ် စတုဒီသာ ရှယ်ပဲ — at Mulayit, Mynmar.
အဆုံးထိဖတ်ပေးတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် ❤️ — at Mulayit, Mynmar.
တောင်ခြေမှာတော့ တွေ့ပီလေ စတုဒီသာ။ အလာတည်းက အားခဲထားရတာ မနေနိုင်ဘူး ဝင်ဆွဲတော့တာပဲဘ😂😁 မုလအိရောက်ရင် သက်သက်လွတ်စတုဒီသာဝင်စားခဲ့ပါနော်။ တကယ်စားလို့ကောင်းလို့ ညွှန်းတာပါ။ စားပြီးရင်တော့ အသက်ဝဝရှုပြီး အဆင်းလမ်းမှာ ဖုန်ရှူဖို့ အားတင်းထားပါတော့ 😛😛 မနက်ပိုင်းပြန်ဆင်းလာရင် မြဝတီမြို့ကို ၂ နာရီလောက်တော့ ပြန်ရောက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည် ထပ်လည်ဖို့မြဝတီမှာကျန်ခဲ့ကြတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ရန်ကုန်ပြန်ဖို့ ညကားစောင့်ရင်းနဲ့ပေါ့……..
မုလအိ Camping သွားရင်ဘာတွေလိုမလဲ⛺
⛺️ Mask၊ ဦးထုပ်၊ နေကာမျက်မှန်
⛺️ Power Bank
⛺️ တောင်တက်ဖိနပ်၊ အင်္ကျီလက်ရှည်၊ အနွေးထည်
⛺️ မိန်းကလေးတွေအတွက် လုံချည်
⛺️ ခြေအိတ်၊ လက်အိတ်
⛺️ ကျောပိုးအိတ်နဲ့ တစ်ရက်တာဝတ်မယ့်အဝတ်အစား
⛺️ Tissue / Wet Tissue
⛺️ အဆာပြေစားမယ့်မုန့်တွေ၊ ကော်ဖီ၊ အခြေခံဆေးဝါးတွေကတော့ @Hpaann.com မှာ အကုန်ပါပါတယ်။
ရှောင်ရန် / ဆောင်ရန်များ
✔️ အမှိုက်လုံးဝ လုံးဝပစ်မချပါနဲ့၊ မချန်ခဲ့ပါနဲ့။
✔️ ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားလုံးအသုံးနှုန်း ဆဲဆိုတာတွေပြောလို့မရပါဘူး
✔️ လင်မယား၊ စုံတွဲတွေ အတူယှဉ်တွဲမတက်ရပါဘူး။ အတူတူမအိပ်ရပါဘူး။
✔️ ဘုရားရှိရာတောင်ပေါ်မှာ အတိုအပြတ်မဝတ်ရပါဘူး
✔️ သက်သက်လွတ်နယ်မြေဖြစ်လို့ အသားငါးတွေယူပြီးစားလို့မရပါဘူး။
✔️ အမျိုးသားတွေတက်ဖူးလို့ရတဲ့နေရာကို အမျိုးသမီးတွေ ကျူးကျော်ပြီး တက်လို့မရပါဘူး။
✔️ Guide ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရပါမယ်
HpaAnn.com က ကိုအောင်ကိုကိုဦး က စိတ်ရှည်ပြီး ဖော်ရွေတဲ့လူမလို့ တစ်ယောက်တည်း Solo သွားလည်း စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးနော်။ သဒ္ဓါဆို တစ်ယောက်တည်းသွားတာပါ နောက်နေ့တောင်မကူးဘူး သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ ပျော်နေရပါပြီ 😂😂😂 တစ်ယောက်တည်းလာတဲ့မိန်းကလေးတွေလဲ တော်တော်များပါတယ်။ ￼
Adventure ကြိုက်တယ်၊ Camping လုပ်ရတာ￼တယ်ဆိုရင်တော့ အများနဲ့မတူတဲ့ မုလအိ Camping လေးကိုတစ်ခေါက်လောက် သွားကြည့်ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေနော် ☺️☺️☺️
အားလုံးပဲ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာနဲ့ သွားလိုရာခရီးကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ သွားလာနိုင်ကြပါစေနော် ❤️❤️❤️
#Mulayit #Camping #KayinState #Adventure #Solotrip